သခွားသီးကပေးတဲ့အကျိုးရလာဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » သခွားသီးကပေးတဲ့အကျိုးရလာဒ်
Posted by ခင်ခ on Dec 3, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 31 comments
သခွားသီးကနေ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေကို သိစေချင်လို့ ခင်ခ ဖေ့ဘုတ်ကို ပို့လာတဲ့ထဲကပြန်လည်ဝေမျှ ရေးပေးတာပါ။
၁။ သခွားသီး တစ်လုံးမှာ ဗီတာမင် ဘီဝမ်း၊ ဘီတူး၊ ဘီသရီး၊ ဘီဖိုက်၊ ဘီဆစ်၊ ဖော်လစ် အက်ဆစ်၊ ဗီတာမင်စီ
၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓါတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော့စဖရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ ဇင့်ဓါတ်တွေ ပါဝင် ပါတယ်။
၆။ ဆိုးဝါးသော ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာကို သက်သာ လိုရင်တော့ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ သခွားသီး အနည်းငယ်ကို စားပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ။ အိပ်ယာထ လာတဲ့ အခါမှာ ခေါင်းကိုက် သက်သာပြီး လန်းဆန်းမှုကို ခံစားရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သခွားသီးမှာ သကြားဓါတ်၊ ဗီတာမင်ဘီ၊ လျှပ်လိုက်ရည် စတာတွေ ပေါကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အဟာရ ဓါတ်တွေကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးကာ အားလုံးကို သမမျှတ နေစေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာ စေပါတယ်။
၇။ တံခါး ပတ္တာက အသံ တကျွိကျွိ မြည်နေပါသလား ဒါဆိုရင်တော့ သခွားသီးကို ကွင်းပြီး အသံမြည်နေတဲ့ ပတ္တာကို ပွတ်ပေးပါ။ တကျွိကျွိမြည် သံ ပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ်။
၈။ သခွားသီးကို လှီးပြီး ရေနွေး ဆူဆူထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ သခွားသီးမှာပါတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ၊ အဟာရတွေဟာ ရေနွေးနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး ထွက်လာတဲ့ ရေနွေးငွေ့ဟာ ပင်ပန်း မှုကို ပျောက်စေတဲ့ ရနံ့ဖြစ်ပြီး မီးဖွားပြီးစ မိခင်တွေနဲ့ အတန်းတင် စာမေးပွဲကို ဖြေရ မယ့် ကောလိပ် ကျောင်းသားတွေကို စိတ်ပင်ပန်း ဖိစီးမှု လျှော့ကျ စေပါတယ်။
သခွားသီးရဲု့အသုံးဝင်တဲ့ အကျိုးရလာဒ်လေးတွေ ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြဖြစ်တာပါ။
ဂွတ်ထ ကောင်းပါလေ့ ဗျာ
အစကတည်းက ကြိုက်ပြီးသားမို့ဒီလောက်အသုံးဝင်ရင်
ထမင်းလျော့ စားပြီး သခွားသီးအစားထိုးလိုက်ရင် ဒိုင်ယက်
လုပ်ပြီးသားပဲ ။ ရန်ကုန်မှာ ရေလမ်းကလာတဲ့  သခွါးသီးပေါက်စလေးတွေက
တော်တော်စားကောင်းပါတယ် ။ ဘိုကလေးဘက်ကလာတယ်လို့ 
သိရပါတယ် ။ ဘာသခွါးဖြစ်ဖြစ် အကျိုးရှိမယ်ထင်တယ် ။
သခွားသီးက စားသုံးရုံတင်မက ဟိုလိုဒီလိုလေးတွေလည်း အသုံးဝင်သမို့တင်ပေးလိုက်တာလေ။
ကြားဖူးတဲ့စကားတစ်ခုက ဖရဲ သခွား အမြဲစား၊ ရေငတ်ကင်းဝေး ကျန်းမာမှု့ပေး တဲ့ဗျ။
သခွားသီးက စားနေကျမဟုတ်ရင် သိပ်မကြိုက်ကြဘူး
အင်မတန်အကျိုးများပြီးဈေးပေါတဲ့သီးနှံတစ်ခု ဟင်းတမယ် ရလာတာပေါ့။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ရတဲ့မုန့်ဘိုးကို မုန့်ဝယ်မစားပဲ သခွားသီးဝယ်ပြီး တဂျွမ်းဂျွမ်းကိုက်စားခဲ့ဘူးတယ်….။
ဦးပါရေ ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်မှာအသုပ်သုပ်စားဖြစ်ရင် ကြက်သွန်ထက် သခွားသီးကို ပါးပါးလှီးပြီး သုတ်စားတတ်တယ်လေ။ ကြက်သွန်နီ အစိမ်းကများများစားရင် အစာအိမ် အစာခြေအက်စစ်ဓာတ် အထွက်များစေလို့လေ။ ဦးပါရဲ့ တဂျွမ်းဂျွမ်းကိုက်စားခဲ့ဘူးတယ် ဆိုတာလေးကို သဘောကျနေမိတယ်ဗျ။
သခွားသီး သိပ်မကြိုက်ပေမဲ့ အသက်ရလာတော့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူအဖြစ်
နဲနဲတော့ စားလာမိပါတယ်..အခုလို အကျိုးကျေးဇူးတွေသိရတော့ ပိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့..
ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုခင်ခ ရေ….
candle ရေ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးတွေကတော့ စားပေးတာကောင်းပါတယ်ဗျ။ အထူးသဖြင့် ခုလိုဆောင်းကာလမှာ ပိုစားခြင်းဖြင့် ၀မ်းတွင်းအပူငြိမ်းပြီး ၀မ်းချုပ်မှု့ကင်းတယ်တဲ့လေ။
တိုင်းရင်းဆေးအယူအဆကတော့ ဆီ ၀မ်း သွေး လေ မှန်ပါစေတဲ့။ ရောဂါတစ်ခုခုအရ ခွဲစိတ်ကုသပြီးရင်လည်း ဆရာဝန်တွေလှည့်လည်ပြီး လူနာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ဆီးသွားတာနည်းလား များလား၊ လေလည်ပြီလား၊ ၀မ်းကောသွားပြီလား အဲဒါတွေ အစုံပြုပြီး သွေးပေါင်ကလည်းမှန်နေမှ ဆေးရုံကဆင်းစေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆီ ၀မ်း သွေး လေ က လူတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးတယ်လေ။
သခွားသီး အစွမ်းက မသေးပါလားနော် …
ကျုပ်နဲ့ သခွားသီးနဲ့ကတော့ ကွက်တိပဲ ..
ဒီကနေ့ကစပြီး သခွားသီးနဲ့ အစွမ်းကို
ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း …
နည်းလမ်းပေးတဲ့ ဦးခင်ခကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း …
ကိုမဟာရာဇာ အံစာတုံးရေ သခွားသီးအစွမ်း ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချမယ်ဆိုလို့
လူချင်းတွေ့ခဲ့ရင် သတိပေးဗျ ( အရွယ်လေးရတော့မေ့တတ်လို့ပါ )။ သခွားသီးရဲ့ ထဲ့မရေးဖြစ်တဲ့ အစွမ်းတစ်ခု ကိုပြောပြမလို့လေ။
ဖတ်ဖတ်ချင်းတော့ အင်း အခြားအသီးတွေလို ဘာရောဂါပျောက်တယ် ညာရောဂါပျောက်တယ် ဒါနဲ့ ပြီးမှာပါ လို့ကြိုတွက်ထားမိတာ ကွင်းလုံးကျွတ်ကြီးကို မှားပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗဟုသုတတွေ ကို တနင့်တပိုး ရလိုက်လို့ဗျို့ ။
ကိုသုရှင်ရေ တစ်ခါတလေတော့လည်း လွဲတာလေးက ကောင်းတတ်ပါတယ်နော့။
သခွါးသီး ၏ နောက်ထပ် အသုံးဝင်သော လျှို့ ဝှက်ချက်
လေးခ ရေ သည်ကွန်မင့်အတွက် စိတ်မရှိပါနဲ့ နော်
တစ်ခါက မိန်းမသုံးယောက် ဈေးမှာ သခွားသီးဝယ်နေကြသတဲ့
ပထမ မိန်းမ က ဒီလိုပြောတယ်
“ ကျွန်မ ကို ရှည်ရှည်နဲ့ အလုံးပေး ”
ဒုတိယ မိန်းမ ကြတော့
“ ကျွန်မ ကို တုတ်တုတ်လေး ပေး ”
တတိယမိန်းမ အလှည့်ရောက်တော့ ဈေးသည်က အရင်မေးတယ်
“ ဘယ်လို အလုံးပေးရမလဲပေါ့ ”
“ ပေးချင်တဲ့ဟာပေးပါ ၊ ကျွန်မ က ဟင်းချက်စားမှာပဲ ” တဲ့
အဲဒါလဲ သခွားသီး အသုံးဝင်ပုံ နည်းတစ်ခု နေမှာပေါ့နော
သခွားသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံနည်းလေး ထပ်ဖြည့်ပေးတဲ့ ဆရာပေရေ ကျေးဇူးနော်။
တတိယသူက ဟင်းချက်စားမှာဆိုတော့ ၊ အရင် နှစ်ယောက်က ဟင်းချက်မစားဘဲ ဘာလုပ်စားမလဲ တွေးကြည့်လိုက်တော့???????
အော် သူတို့က တို့စရာအဖြစ် တို့စားမလိုထင်တာဘဲ။
အမ် ဥူးရေးတို့ကလဲ …
ရှည်ရှည်နဲ့ အလုံးက တို့စား မလို့ …
တုတ်တုတ်လေးက အသုတ်ထဲ ထည့်စား မလို့ …
တိလဲတိပဲနဲ့ ဟွင့် …
အော် ရွာသူ jujuma ရှင်းပြလိုက်မှဘဲ ရှင်းတော့တယ်ဗျာ။
ဒါပေသိ အခြားတစ်ပါးသူများကိုတော့ဖြင့် ဆရာလုပ်ပြီး ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။
အခြားတစ်ပါးသူများကို စေတနာထားပြီး ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။
သံပုရာသီးရဲ့ အကျိုးပေးအာနိသင်ကိုတော့ဖြင့် သိချင်လွန်းလှတယ်ကွယ် . . . . . . .
မောင်ရင့် အမည် ပေးထားပုံကလည်းကွာ။
ဒီလိုပါ ဒီလိုပါ ကျနော် ရဲ့အမည်အရင်းက
ကမ္ဘာဦးအစ ကျောက်ခေတ်လူသား အင်အားကြီးမျိုးနွယ်စု၏ တစ်ဦးတည်းသော ခေါင်းဆောင် ဗုဒ္ဓသက်တော်ထင် ရှားရှိစဉ်ကာလ၌လည်း ပါလလုင် အမည်ဖြင့်တစ်ကြိမ်လူဖြစ်ဖူးသော
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကျန်လူသား သခင်မိုဘိုင်း
ကိုမိုဘိုင်းရယ် ဒီလိုဆိုလည်း တိုတိုလေးအမည်ပေးပေါ့ ခုတော့ပြန်ပြီးရေးရမှာတောင် လက်ညောင်းတယ်ကွယ့်။
ဇေယျာကို အန်တုမလို့ :harr:
ခညားက သခွားသီး သုတ်စားတာ
ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ မေးရဘာအုံးမယ် ..
ရှည်ရှည် ကြိုက်လား ..
တိုတိုတုတ်တုတ် ကြိုက်လား …
ဘာလိုပုံပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တာလား … ငွင်း .. ငွင်း ..
ဒို့ မောင်လေး မောင်အံစာများ..ဟိုဘက်ပိုစ့်မှာ ယောင်တာတောင် ဒီအမကို တပြီးတော့..
ကိုခ မောင်ပေက သခွားသီးကိုရေးဆေးပြီး နာမယ်ကြီးလာတာဗျာ
မနိုဗွီရေ နဂိုလှပြီးသားမျက်နှာပိုဝင်းနေမှ မနာလိုစရာတွေဖြစ်နေအုံးမယ်နော်။
ကိုကြည်ဆောင်ခင်ဗျ စမ်းကြည့်ပြီး အဆင်ပြေရင် လက်ပြန်တို့အုံးနော်။
သခွားသီးကို သုတ်စားတာ ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဗျ ကိုကြီးမိုက်ခင်ဗျ။
ကိုမဟာရာဇာ အံစာတုံးရေ သခွားသီးကတော့ သခွားသီးဘဲ မဟုတ်ဘူးလားဟင်။
Candle လည်းဝင်မန့်တာကို ကျေးဇူးပါ။
ကိုပေါက်ရေ မမေးတော့ပါဘူးဗျာ။ မတူးဖော်ကောင်းတဲ့အတိတ်ကို တူးဖော်မိရင် ကံမကောင်းတတ်ဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်ဗျ။ လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းဘဲ ခင်မင်ကြတာကောင်းပါတယ်နော်။
“ကိုမဟာရာဇာ အံစာတုံး” လို့ ခေါ်ဘာနဲ့ဂျာ ..
ဖတ်ရဒါ တငြိုးဂျီးဘဲ …
တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲ .. အဲ .. ဟုတ်ဘူး .. ဟုတ်တယ် .. အင်း .. အဲ့လိုပေါ့ဗျာ ..
အဲလို ခေါ်ဘာလို့ .. အဟီးးးး
အပေါ်က ဥကြီးမိုက်ကို ကြောဒါလည်း ..
အင်း .. သခွားဒီးဘဲ ဖစ်မှာဘာလေ …
သခွါးသီး ကိုအင်မတန် ကြိုက်ပါတယ်။
အကျိုးကျေးဇူး တွေ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ဒါထက် အရင် Post မှာ ရေးထားတဲ့ ကြက်ဥ အကြောင်းမှာ ကြက်ဥ ကို ထမင်းအိုးကျက်ခါနီးပေါ်မှာ ထည့်လိုက်ရင်ရော၊
အဲဒီလို အလွယ် လုပ်နေကျမို့။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောတ်က အဲဒါမကောင်းဘူး ပြောဘူးလဲ လုပ်နေတာ။
အခု ကိုခင်ခ ရဲ့ ဂျူးစာ ကို ဖတ်ပြီး တွန့်သွားတယ်။
ကြက်ဥအခွံကို ရေမဆေးဘဲခွဲခဲ့ရင်သာ၊ ဒါမှမဟုတ် အလုံးလိုက်ရေမဆေးဘဲ ထမင်းအိုးထဲ မြုပ်တာကတော့ကြက်ဥအခွံမှာ ပါလာတတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေက အခြားစားစရာကို ကူးမှာကို ဆရာမဂျူးကဆိုထားတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးက၀ယ်လာတဲ့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ ဆိုရင် ရေလေးဆေးပြီး ခေတ္တ အခြောက်ခံပြီးမှ ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းပြီထားတယ်လေ။ အဲလိုအလုံးလိုက် ရေဆေးပြီးသား ကြက်ဥကို ခွက်ကလေး၊ ပုဂံလုံးလေးထဲမှာ ကြက်ဥအရည်ကြည်နဲ့အနှစ်ရယ် ရေ သို့မဟုတ် ဟင်းရည်အနည်းငယ်ရယ် ရောမွှေပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ တဲ့ပေါင်းတာကတော့ ရပါတယ် အရီးရေ။
နှင်းနှင်းကတော့ ကြက်ဥ၊ဘဲဥဆို ရောဂါက..ရေနဲ့ ဆေးရုံတင်မက ရေမိုးချိုးပေးလိုက်သေးတယ်..
ဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ပစ်လိုက်တာကို ပြောတာ… ..
မကျက်တကျက် ကြော်ရင်တော့ မကြော်ခင် အဲဒီလို အကုန်ဆေးပြီးမှ ကြော်တယ်..
ချက်ရင်တော့ ရေပဲပြောင်အောင်ဆေးပြီး ပြုတ်လိုက်ပါတယ်…
CP တံဆိပ် ကြက်ဥက ကတ်နဲ့ဆိုတော့ သန့်တာတော့ များပါတယ်…ချေးပေခဲတယ်…
ဈေးက၀ယ်မိရင်တော့ အ၀တ်နဲ့ပြောင်အောင်သုတ် ထည့်ရတယ်…
ရေဆေးလိုက်ရင် ပုပ်လွယ်သွားမလားလို့(ထင်တာ) မဆေးဘူး…
နံပါတ် ၆ ဖတ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို သခွားသီးအနံ့ရရင် မူးလို့ သူ့မခံနိုင်ဘူး..
စားလို့လည်း မရဘူး….သူ့မျက်နှာ ကပ်ရင်လည်း allergic ဖြစ်တယ်…
သခွားသီးက ဒီလိုလည်း အသုံးဝင်တာကိုး … အစကတော့ မသိတောင် မသိခဲ့ဘူး အန်ကယ်ရေ ။
အိမ်ရောက်မှ မှန်တွေ တိုက်ကြည့်ဦးမယ် ။
သမီးကတော့ သခွားသီးလုံးဝ စားလို့မရဘူး ။ စားတာနဲ့ ဗိုက်အောင့်တာ5မိနစ်တွင်း .. စမ်းပြီးပြီ အကြိမ်ကြိမ်မို့ .. ထပ်မစားရဲတော့ဘူး .. ဟီး
အိမ်ရောက်လို့ စမ်းကြည့်ပြီး ရေးထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဖုန်းဆက်လိုက်လေ။
မှန်ကြည်ဆေးရည်ဗူး အစားပြန်ပို့ပေးမယ် သမီးရေ။